Dabshid 1112 sanad wacan oo wacan somaliyey
Sunday July 18, 2021 - 10:43:00 in Articles by Xaaji Faysal
Mudo kadib ayey dhagahaygu maqlen Dabshid.
sandku wuxu aha 2003 ila 2004 Waxan jogay tulada jerow oo kofur bari kaga began dagmada qorooyeley ee shabeelaha hose .
Wa goor fiid ah oo barbarta tuulada iskuguso baxen meel banan ah si ay iskugu xujeestan ka dulboodida dab wayn oo lagu guray xabo badan si darana loo ololiyay , Sido kale waxa jogay goobta ciyaarta gabdho mamoyin iyo caruur uso daawasho tagay .
Dhalinta ciyaareysay aya meel xooga ujirta dabka inta orod kasoo bilaaban kadulboodaysay dabka waxay ehed ciyaar aad lojeclesto qof walba oo kaboodna sacab ayaa lootumayay .
aniga ima aysan suurtobin in aan ka bodo
madama dabaka habeenka lashiday oo dhirir ahaan igu laba jimaarmayay.
In mudo ah oo sawaxan iyo sacab socday kadib majirin qof dabka kudhacay si habsami leh ayeyna kuso dhamatay ciyaarti quruxda badned .
Ma ogaan karin in ula jedka dabkan looshiday aha in sand cusub lagalay sababtoo ah Majirin dad isku hambalyaynayay ama xita sigaara igu sheegay in sand cusub lagalay , Yaranteydii dhan waxaan uheysatay in ay kamid aheed ciyaar kamid ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee somalidu ciyaarto
Dabshidkaas wuxu aha kii ugu danbeeyay ee ka dhacay tuuladeyda jeerow wax walbana hada wa ay is badalen .
W/Q Mohamed malin